Abou Bakr - kalifa voalohany Miozolomana
History & Culture Zava-dehibe ny olona & zava-miseho
Teraka tany amin'ny fianakaviana nanan-karena i Abu Bakr, mpivarotra nahomby ary nalaza noho ny fanaovana ny marina sy ny hatsaram-panahy. Ny fomban-drazana dia milaza fa, efa ela dia naman'i Muhammad i Abu Bakr, dia nanaiky avy hatrany ho mpaminany izy ary lasa lehilahy lehibe voalohany hanova ny finoana silamo. Muhammad dia nanambady an'i Aisha, zanakavavin'i Abu Bakr, ary nifidy azy hiaraka aminy tany Medina.
Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany dia nangataka an'i Abu Bakr hanolotra vavaka ho an'ny vahoaka i Muhammad.
Izany dia nalaina ho marika izay nofinidin'ny Mpaminany an'i Abou Bakr mba handimby azy, ary taorian'ny nahafatesan'i Muhammad dia noheverina ho "solontenan'ny Mpaminany" voalohany na i kalifa i Abou Bakr. Fikambanana iray hafa no nanasokajy ny zanakavavin'i Ali Muhammad ho kalifa, fa i Ali dia nanolotra, ary i Abu Bakr dia nandray ny fitantanana ny Arabo Miozolomana rehetra.
Amin'ny maha-kalifa an'i Abou Bakr, dia nitondra ny Arabo afovoany rehetra teo ambany fitantanana Miozolomana i Abu Bakr ary nahomby tamin'ny fampielezana ny finoana Islam tamin'ny alalan'ny fandresena. Hitany koa fa voarakotra an-tsoratra ny tenin'ny Mpaminany. Ny fanangonana ny teny dia ho tafiditra ao amin'ny CORAN (na Q'uran na Koran).
Maty nandritra ny enim-polo taona i Abou Bakr, angamba avy amin'ny poizina saingy azo inoana fa avy amin'ny antony voajanahary. Talohan'ny nahafatesany dia nantsoina ho mpandimby azy izy, ary nametraka fomba amam-panaon'ny governemanta voafidy voafidy. Taonjato maromaro taty aoriana, taorian 'ny fifandonana dia nitarika ho amin'ny famonoana sy ny ady, ny finoana silamo dia nizara ho roa: ny Sunni, izay nanaraka ny kalifa sy ny Shi'ite, izay nino fa i Ali dia mpandova ny Muhammad ary tsy hanaraka ireo mpitarika nidina avy aminy.
Abu Bakr dia fantatra ihany koa
El Siddik na Al-Siddiq ("The Upright")
Abu Bakr dia voamarika
Ny maha-namana akaiky sy mpiara-mitory an'i Muhammad sy ny kalifa silamo voalohany. Izy no iray amin'ireo lehilahy voalohany niova fo ho amin'ny finoana silamo ary nofinidin'ny Mpaminany ho mpiara-mitory aminy ao amin'ny Hijrah ho any Medina.
Toeram-ponenana sy ny fiantraikany
Teraka: c. 573
Namarana an'i Hijrah ho any Medina: 24 Sept., 622
Maty: 23 Aogositra, 634
Teny nindramina tamin'i Abou Bakr
"Ny fonenantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fivoahana, ny fiainantsika ao dia ny fampindramam-bola, ny laharan-tsaintsika dia voaisa ary ny fisehosehoana dia miharihary."
Ny anton'ity antontan-taratasy ity dia ny zon'ny mpamorona © 2000, Melissa Snell. Azonao atao ny maka na manonta ity tahirin-kevitra ity ho an'ny mpampiasa azy manokana na amin'ny sekoly raha mbola misy ny URL ambany. Ny fanomezan-dàlana dia tsy omena hamerina ity rakitra ity amin'ny tranonkala iray hafa.
Famaranana ny Lusitania
Sarin'i Jackie Kennedy
Beowulf dia tononkalo tranainy tranainy
Ny fianakavian'ny Hitler
Ny biography of Jane Goodall
Ireo bisikileta Top 17 avy amin'ny EICMA Motorcycle Show
Qué hacer cuando la visa americana es relazada por fraude
Metals List of Elements
Fampahafantarana ny mozika candle
Soka Gakkai International: lasa, ankehitriny, hoavy
Fampidirana ny fandinihana ny isa
Iza moa ilay 'Alice' ao amin'ny 'Nice Putt, Alice'? Mandehana anontanio Alliss
Ireo asa an-tsekoly izay azonao atao fa tsy afaka hirahira
Fametrahana tobin-tsolika vaovao
Fampidirana ny Preg amin'ny PHP
Fampahafantarana momba ny zon'ny mpamorona sy ny fampiasana ny mari-pahaizana Copyright
Top '80s Songs of the League League
Miatrika ny tsikombakomba sy ny lehilahy-o-ady
Mamorona fanadinana tsotra amin'ny Access 2013
Moa ve ny College College Ivy Tech any Inde ho anao?
Ho an'ny Mpianatry ny olon-dehibe
Ny Fitsarana Marina Momba ny Fitsarana Tampon'i Etazonia
Tokony hahazo salan'isa ve aho?
Anarana iombonana amin'ny teny hongariana
Pommel Horse: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Fahadisoana mahazatra amin'ny teny Anglisy - They vs vs. ny azy ireo
Jereo ny tena mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana Rhodes
Ny fomba hiarahana amin'ny arkanjely Michael sy Raphael hanamaivana ny fahorian-tsaina